Top 5 bẫy chuột thông minh tốt nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 bẫy chuột thông minh tốt nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Senza ucwaningo oluzimele, ukuhlola umhlaba wangempela futhi sincoma imikhiqizo ehamba phambili, bona inqubo yokubuyekeza lapha. Singathola ikhomishini lapho uthenga.
Amagundane angelinye lamagundane amaningi ahlupha amakhaya ngenxa yezinga lawo elingapheli lokucekela phansi inzalo engapheli. Ngakho-ke, izicupho zamagundane ezihlakaniphile zenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zemindeni ukubulala amagundane.
Kodwa akuwona wonke umuntu owaziyo ukuthi angakhetha kanjani ukuthenga isicupho segundane esisebenzayo nesiphephile somndeni. Ngezansi ngizokwethula izicupho ezi-5 eziphambili zamagundane eziletha ukusebenza kahle okuphezulu, ake sibheke!
1 Izicupho ezi-5 ezihamba phambili zamagundane ahlakaniphile zango-2022
1.1 I-Smart mouse trap, ungawabulali amagundane
1.1.1 Ukubuyekeza Okusheshayo I-Smart Mouse Trap, Ungabulali Amagundane
1.2 Umvikeli Igundane Trap Ibhokisi
1.2.1 I-Protector Mouse Trap Box Buyekeza Ngokushesha
1.3 Izitika zegundane lasekhaya lase-Japan
1.3.1 Ukubuyekeza okusheshayo izitika zegundane lasekhaya lase-Japan
1.4 I-Smart mouse trap clamp
1.4.1 Ukubuyekeza Ngokushesha I-Smart Mouse Trap Clamp
1.5 Isicupho segundane se-semicircular ebucayi kakhulu
1.5.1 Isibuyekezo esisheshayo Ugibe lwamagundane oluyi-semicircular olubucayi kakhulu
2 Ithebula lokuqhathanisa lamagundane ahlakaniphile angcono kakhulu namuhla
3 Yini i-smart mousetrap?
4 Ungayisebenzisa kanjani i-smart mouse trap ngempumelelo
5 Amanothi lapho ukhetha ukuthenga izicupho zamagundane
5.1 1. Khetha umsebenzi oyinhloko we-mousetrap
5.2 2. Ukuphepha kogibe lwamagundane
6 Isiphi isicupho segundane esihlakaniphile esingcono kakhulu?
6.1 I-Smart mouse trap, ungawabulali amagundane
7 Imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
Izicupho ezi-5 ezihamba phambili zamagundane ahlakaniphile zango-2022
Uphawu lokuhweba: Akukho Brand
I-Smart mouse trap, ungawabulali amagundane
Ukubuyekeza Okusheshayo I-Smart Mouse Trap, Ungabulali Amagundane
Kimina, ukusebenzisa lesi siqeshana segundane kuyajabulisa kakhulu ngoba ungangcolisi imvelo futhi ungawabulali amagundane indawo enalesi sici njengendawo enkulu yokuhlanganisa yomkhiqizo.
Ngokuqondene nomklamo wesicupho Idizayini yeminyango engu-2 yenza kube lula ukuthi amagundane angene kodwa awakwazi ukuphuma. Amaphoyinti amaningi okuhlanganisa alo mkhiqizo Osayizi abahlukahlukene ongakhetha kukho.
Xem Thêm Cách chia sẻ màn hình Zoom trên máy tính cực kỳ đơn giản | Muasalebang
Izicupho zihlala isikhathi eside ngoba zenziwe ngokhuni nensimbi. Nokho Intengo yalesi sicupho iphezulu impela futhi nini Uma isetshenziswa isikhathi eside, insimbi izogqwala Ngakho udinga ukuhlanza indlu yangasese ngemva kokusetshenziswa!
Bamba ungalibulali igundane
Umvikeli Igundane Trap Ibhokisi
I-Protector Mouse Trap Box Buyekeza Ngokushesha
Kimi, lokhu imikhiqizo enokuphepha okuphezulu. Uma ucupha igundane lakho Akukho ukwesaba ukuthikameza imfuyo futhi akukho ukungcola imvelo.
Umkhiqizo ifakwe ilokhi yokuphepha, ungasebenzisa izicupho ezahlukahlukene Amagundane angasetshenziswa njengeglue ukuze angene emhlanganweni noma ungasebenzisa i-pulp ukwengeza engxubeni ukuze amagundane angene futhi adle futhi anamathele ogibeni.
Mayelana nomklamo webhokisi Dizayina ukuze udale isikhala esifana nesidleke segundane siza amagundane azizwe ekhululekile lapho edla isiyengo. Umkhiqizo ulungele ukusetshenziswa ezakhiweni zamafulethi, izikhungo zezentengiselwano, izindlu zokuhlala, amahhovisi, izindawo zokugcina impahla, njll.
Nokho, lapho mina mathupha ukusebenzisa lo mkhiqizo, ngizizwa Ukumelana komthelela womkhiqizo kubi impela Uma into esindayo iwela ecaleni, ingozi yokuphuka iphezulu kakhulu.
I-Mouse Trap Box
Izitika zegundane lasekhaya lase-Japan
Ukubuyekeza okusheshayo izitika zegundane lasekhaya lase-Japan
Kimi, lokhu Isitika esinamathela kakhulu sisiza ukubamba amagundane ngempumelelo enkulu. Ngendlela yalesi siqeshana ungasigoqa sibe yithubhu noma usishiye siphansi ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu.
Igundane Trap nge Kulula ukuyisebenzisa, vele uvule ibhokisi, ukhiphe iphepha elimpunga, ukuze ubambe igundane (okusele, ushizi, amabhisikidi) phakathi nendawo yephepha elinamathelayo futhi okulandelayo ukubeka indawo lapho igundane lijwayele ukuvama khona.
Lapho igundane liwela ogibeni, faka isicupho segundane esikhwameni sikadoti, ngokushesha, Iphephile futhi ihlanzekile kubasebenzisi. Nokho, lesi sici se-glue ingasetshenziswa kanye kuphela ngakho-ke kubiza kakhulu.
Xem Thêm [CHI TIẾT] Cách Chỉnh Màu Màn Hình Laptop Win 10 HIỆU QUẢ | Muasalebang
Igundane Trap Glue
Uphawu lokuhweba: I-OEM
I-Smart mouse trap clamp
Ukubuyekeza Ngokushesha I-Smart Mouse Trap Clamp
Isici esivelele kakhulu salesi sigxivizo segundane esihlakaniphile nguwe Usengabamba amagundane ngaphandle kokusebenzisa isiyengo. Khetha indawo ozobeka kuyo ibhokisi logibe endaweni lapho amagundane evamise ukudlula khona, njengasezindongeni, ezindaweni zezintambo zikagesi (amagundane noma izintaba), amakhona esitolo, indle, njll.
Umkhiqizo Kulula ukusebenzisa futhi izicupho ezinamandla, bulala amagundane ngaso leso sikhathi ngisho igundane elikhulu. Izinto zomkhiqizo zenziwe ngepulasitiki ye-ABS, ngakho-ke akukho ukugqwala.
Nokho uma usebenzisa kodwa Udinga ukuqaphela ukugwema izicupho clamping ezandleni zakho. Kimina, ugibe alulungile uma lusetshenziswa endlini nezingane.
Igundane Trap Isiqeshana
Bulala amagundane ngaso leso sikhathi
Isicupho segundane se-semicircular ebucayi kakhulu
Isibuyekezo esisheshayo Ugibe lwamagundane oluyi-semicircular olubucayi kakhulu
Kimi, lokhu umugqa wezicupho zegundane ezishibhile ezifanele izidingo zabantu abaningi ukusuka emadolobheni kuye emaphandleni.
Ugibe lwenziwe ngensimbi, luhlala isikhathi eside futhi luzwela kakhulu Ukubamba igundane, udinga nje ukudla igundane futhi lizobhujiswa ngokushesha.
Nokho, kimina, lo ngumkhiqizo Akuphephile kakhulu ngoba kungacupha izilwane ezifuywayo zomndeni zife njengezinkukhu, amadada, njll, ngakho-ke uma ucupha udinga ukunaka lapho ugibe lukhona.
Uma ubeka izicupho, kufanele ubeke futhi uhambise isicupho ngobumnene futhi usibeke endaweni edingekayo, ugweme ukugoqa isicupho ezandleni zakho noma uvumele abadlulayo babanjwe ku-mousetrap, okuzoba yingozi kakhulu.
Ithebula lokuqhathanisa lamagundane ahlakaniphile angcono kakhulu namuhla
Yini i-smart mousetrap?
Isicupho segundane esihlakaniphile siqondakala kalula njengethuluzi elisetshenziselwa ukubamba amagundane aklanywe ngokwesiko legundane lokungena emgodini ukuze lithole udoti, okusiza umsebenzisi ukuthi angachithi isikhathi esiningi futhi anezici ezihlukile. izinzuzo ezifana nalezi:
Bamba amagundane amaningi ngesikhathi esisodwa.
Kulula ukuyisebenzisa, vele ubeke usuku lapho isicupho sidingeka khona.
Ukukhipha igundane kulula futhi kuphephile endaweni kanye nomsebenzisi.
Xem Thêm Top 10 game 2D hấp dẫn trên Steam cho máy tính cấu hình yếu | Muasalebang
Yini i-Smart Mouse Trap?
Ungayisebenzisa kanjani i-smart mouse trap ngempumelelo
Ngokuya ngesakhiwo sohlobo ngalunye lwe-smart mouse trap, uzoba nokusetshenziswa okuhlukile, kodwa ngokuvamile, ukwakheka kwe-smart mouse trap nakho kulula kakhulu, ngakho-ke indlela yokusebenzisa ugibe nayo ilula kakhulu.
Isinyathelo 1: Khetha indawo yokubeka isicupho
Isinyathelo sesi-2: Faka i-bait ogibeni
Isinyathelo sesi-3: Ilinde umphumela
Ungasebenzisa ngokuphelele amagundane ahlakaniphile ukuze ucuphe amagundane ekhaya lakho, imboni, indawo yokudlela, njll. Ngamafuphi, noma yikuphi lapho kukhona amagundane ofuna ukuwacupha.
Udinga nje ukulandela indlela yegundane noma uhambe njengokuseduze kwezindonga, ukwahlukanisa, phezulu, uphahla noma indawo yokugcina impahla, .. vele ubone noma yimaphi amathrekhi egundane, ungabeka izicupho lapho futhi ekugcineni uzozibamba. .
Ungayisebenzisa kanjani i-smart mousetrap
Nokho, indlela yokusebenzisa i-smart mouse trap ilula. Kodwa futhi udinga ukunaka izici, imikhuba, nokudla.
Ngokuphathelene nezicupho zamagundane, kunezinhlobo eziningi, isibonelo: irayisi, ummbila, amazambane, umdumbula, inhlanzi, okomile, ukudla.. Ohlotsheni ngalunye lwe-bait, ungalushintsha uma ubona uhlobo oyisebenzisayo.
Isibonelo, uma ungasisebenzisi kahle lesi silo, kufanele ushintshe uye kwesinye isiyezo ukuze uqhubeke nogibe.
Uma igundane lamukela isiyengo, kuvamile ukuthi isicupho samagundane sibambe inqwaba yawo ngobusuku.
Ukuze uthole imiphumela engcono ngemva kogibe ngalunye, kufanele uhlanze isicupho kahle, usomise ukuze ususe iphunga lamagundane ngaphambi kokuba ubanjwe. Ngakho amagundane alandelayo ngeke abe namahloni futhi azoqhubeka evalelekile!
Amanothi lapho ukhetha ukuthenga izicupho zamagundane
1. Khetha umsebenzi oyinhloko we-mousetrap
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zezicupho zamagundane emakethe namuhla. Uhlobo ngalunye lwesicupho luzoba nomsebenzi othize. Ngakho-ke, lapho ukhetha ukuthenga isicupho segundane, udinga ukunaka umsebenzi oyinhloko wesicupho futhi uqhathanise nezidingo zomndeni wakho kanye nezidingo zakho zokukhetha uhlobo olufanele lwesicupho! Isb:
Khetha umsebenzi oyinhloko wesicupho segundane
I-Semicircle mouse trap: Ngokuvamile lolu hlobo lwesicupho lusetshenziselwa ukubamba amagundane amancane njengamagundane futhi uqaphele ukuthi lesi sicupho singabamba eyodwa futhi lapho igundane libanjwe ogibeni, lizoboshelwa lize life ngokushesha.
Isicupho sekheji: Lolu hlobo lwesicupho lungabamba wonke umhlambi wamagundane, kungakhathaliseki ukuthi igundane likhulu noma lincane kangakanani. Lolu hlobo lwesicupho lusebenza kakhulu kimi, kodwa kuthatha isikhathi ukuluheha ekhejini. Lolu hlobo lwesicupho kulula kakhulu ukulusebenzisa futhi lapho isicupho sinamathela, ngeke sibabulale kodwa sibabambe bephila.
I-Glue Trap: Lolu hlobo lwesicupho lunendlela efanayo ne-semicircular trap. Kodwa ikhemikhali eku-glue izobulala igundane. Iglue yegundane isebenza kuphela kumagundane amancane, ikakhulukazi kumagundane amakhulu, amandla okubalekela ogibeni nawo aphakeme kakhulu.
2. Ukuphepha kogibe lwamagundane
Ukuphepha kogibe nakho kuyinto ebalulekile okudingeka uyikhumbule lapho ukhetha ukuthenga. Nge-semicircular trap, udinga ukunaka ukuphepha lapho usebenzisa izicupho zamagundane kanye nabasebenzisi.
Bheka ukuphepha kogibe lwamagundane uma uthenga
Ngokuvamile ama-semicircular trap azoba nezikhonkwane zokuphepha kanye nemiyalelo yokugcina izingane zingangeni.
Ngohlobo lwesicupho senhliziyo lapho ukhetha ukuthenga, udinga ukunaka iminyango nemigoqo ukuze uqiniseke ukuthi ixege kakhulu, okwenza kube lula ukuthi amagundane abaleke lapho evaleleke.
Ngokuqondene nomgibe weglue, udinga ukunaka umsuka weglue, ukuqinisekisa ukunamathela okuhle ukunamathela igundane kodwa ungalimazi umsebenzisi.
Isiphi isicupho segundane esihlakaniphile esingcono kakhulu?
Ngenhla yizicupho ezi-5 eziphezulu zamagundane ezithakazelelwa kakhulu abathengi kanye nolwazi lwabo lapho besebenzisa. Kimina, isicupho segundane esihlakaniphile esingawabulali amagundane singifanele kakhulu, ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo:
Mayelana nomklamo: Idizayinelwe ngezicabha ezi-2 ukusiza amagundane ukuthi angene kalula ngaphandle kokukwazi ukuphuma. Okunye okuhlanganisa lo mkhiqizo izinhlobonhlobo zamasayizi ongakhetha kuzo.
Mayelana nokuphepha: Kimina, uma ngisebenzisa lo mgibe wegundane, ngiyawuthanda ngoba awungcolisi indawo futhi awubulali amagundane khona lapho ngalesi sici njengephoyinti lami elikhulu lokuhlanganisa lomkhiqizo.
Mayelana nenani: Nakuba umkhiqizo ubiza kancane, ungaphinda uwusebenzise izikhathi eziningi.
Igundane ngalinye linezinzuzo kanye nokubi. Ngokuya ngezimo zakho zomnotho kanye nezidingo zakho, kufanele ukhethe umkhiqizo ofaneleka kakhulu kuwe!
Njengamanje emakethe, izinhlobo ezi-3 ezidume kakhulu zokucupha amagundane ezisebenza kahle kakhulu kubasebenzisi yilezi:
I-Semicircle mouse trap (eyaziwa nangokuthi i-clamp trap)
Uxhaka lwegundane lohlobo lwekheji
Ngethemba ukuthi ngesihloko esingenhla sizokusiza ube nolwazi oluthe xaxa ekukhetheni ukuthenga isicupho segundane esihlakaniphile ukuze usebenze kahle. Ngethemba ukuthi uzosiqeda lesi silwane somndeni esicasulayo maduze!